Maxkamadda ICJ Oo Aqbashay Codsigii Kenya, Dibna U Dhigtay Dhegaysiga Dacwaddii Badda Ee Somaliya & Kenya - Jigjiga Online
HomeSomalidaMaxkamadda ICJ Oo Aqbashay Codsigii Kenya, Dibna U Dhigtay Dhegaysiga Dacwaddii Badda Ee Somaliya & Kenya
Maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ oo la filayay in Isniinta soo socota ay bilowdo dhegeysiga kiiska badda ay ku muransan yihiin Kenya iyo Soomaaliya, ayaa muddo laba bilood ah dib u dhigtay.
Xukuumadda Nairobi ayaa maxkamadda ka cosdatay in kiiska dib loogu dhigo muddo sanad ah si ay u qoroto qareenno cusub, sida ay sheegtay warbaahinta Kenya.
Kiiskan oo meel xun gaarsiiyay xiriirka labada dal ayaa la filayaa in maxkamadda ay go’aan ka gaarto cidda leh aagga badda ee lagu muransan yahay.
Danjire Cali Siciid Fiqi oo ah safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub ayaa sheegay in dowladdiisa aan lagala tashan go’aanka, balse aanay wax dhib ah u arkin.
“Anagu waam ku qanacsannahay, waayo markii hore ee aan doodda geynay waxaan codsanay inaan dib loo dhigin, laakiin haddii ay maxkamadu gaartay laba bilood wax dhib ah uma aragno,” ayuu yiri safiir Fiqi.
Dacwadda ayaa hadda lagu wadaa inay maxkamadda dhegeysigeeda bilowdo 4-ta Nofembar 2019.
Kulankii Addis Ababa
Guddiga Amniga iyo Nabadda Afrika oo maalin ka hor shir ku yeeshay Addis Ababa, ayay Kenya ka sheegtay inay dooneyso in dacwadda ku saabsan badda ay isku hayaan Soomaaliya lagu xalliyo wadahadal, dibna loo dhigo si ay u qorato qareenno xooggan oo difaaca.
Wasiiru-dowlaha Arrimaha Dibadda ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Khayr ayaa kulanka guddiga amniga ee Midowga Afrika ka sheegay in Soomaaliya ay ku kalsoon tahay in dacwaddan lagu dhammeeyo Maxkamadda Caddaaladda Adduunka oo ay hor taallo.
Dalka looga guulaysto kiiska ayaa waxa uu waayi doonaa boqol kun oo KM2 oo ah aag ka tirsan badweynta Hindiya oo la rumaysan yahay inay ku jiraan shidaal iyo gaas badan.